Igbo N’ile Bu Ofu Ndi – IGBO DEFENDER
Umu Igbo, e kele m unu o. A chorom ka mu jiri usoro a we si, ka anyi ncha gbakor aka ka Igbo n’ile di mma. Ka anyi gbakor aka dozie Ala Igbo, ma nyere onwe anyi aka, n’usoro di iche iche.
Ka anyi gbakor aka n’ife n’emebi. Ka anyi gosi uwa na Igbo a ma etisa ka esi che maka ife ojo n’ile na eme.
O nwere ihe ufodu ndi bu ndi ilo ndi Igbo na achoro ka anyi wota. Ha achoro ka Igbo jiko aka. Ha siri na Ikwere (na Rivers State) na Nkwere ( Imo State) abuhi ofu ndi. Ha siri na ndi Ndokwa (di na Delta State) na ndi Ndoki (di na Abia State) abuhi ndi Igbo.
I fugo ka ha si n’ekewa anyi, kemgbe kemgbe. Ke ka ha ya esi gwa anyi na umu nne anyi abuhi umu nne anyi. Tufiakwa! O buru ogu, na o ma ele!
Igbo, e kwuo la m, ka oke m ha, n’uchichi a. Ka anyi gba mgbor ka chi anyi fo. Dalu nu, Umu Igbo.
Categorized as Culture Tagged Igbo, language, unity
He Feels Guilty About Something Terrible He Did (Must Read)
Prince and Princess Charles Offokaja Foundation June 27, 2022 1:18 am -1.00 Cashable Igbodefender Points for becoming a member
Osvaldo Cowper June 27, 2022 1:18 am 1.00 Cashable Igbodefender Points for becoming a member
Prince and Princess Charles Offokaja Foundation June 27, 2022 1:06 am -1.00 Cashable Igbodefender Points for becoming a member
Jaxon Whiddon June 27, 2022 1:06 am 1.00 Cashable Igbodefender Points for becoming a member